Mmadụ Bịa ka Ekpere mkpali devotional Broadcast # 320
Dị ka mgbe niile, ọ bụ ya mere ihe ọma na-na gị taa-agba gị ume-ekpe ekpere.
Taa, m ga-amasị-amalite site-ekere òkè na ị a uri akpọ "Nke a ka m ekpe ekpere" site Timothy Jon Barrett.
Mmụọ Nsọ, na-ekwu okwu site na m,
otú nile furu efu mkpụrụ obi nwere ike hoo haa na-ahụ,
bụghị uche m, kama ọ bụ Chineke m na-achọ.
Okwu gị si dị ike,
ebe m na-adịghị ike.
Mmụọ Nsọ, na-akụziri m hụrụ n'anya,
Ya mere, ndị na asị na ike ịrị n'elu.
Na m maara na ịhụnanya, ọ bụ isi,
otú a ka m na-ekpe ekpere, show ịhụnanya site na m.
Mmụọ Nsọ, nyere m aka na-enye,
otú ndị na-enweghị, site unu wee dị ndụ.
Iji na-enye ndị na-ná mkpa,
ịkọrọ m ngwongwo, ma ọ bụghị na anyaukwu.
Mmụọ Nsọ, ka m maara ihe,
na-eri nri m ihe ọmụma, obi m ọ na-etikwa.
Iji ghọta ihe m na-amaghị,
biko mee ka m maara ihe, ka m wee na-eto eto.
Mmụọ Nsọ, nyere m aka obi,
ịdabere na Ị, n'oge m ga-.
My okwukwe ga-eto oge ọ bụla m na-eme.
Biko, k'Okwu m obi, m obi gị.
Mmụọ Nsọ, na-m nganga,
weda m na-abụ m na ndu.
Ụzọ bịa nganga, na mgbe ahụ ọdịda.
Ka m nganga n'ime unu, ma ọ bụ onye ọ bụla mgbe nile.
Mmụọ Nsọ, ka m obi ike,
na-agbasa ozi ọma, Akwụkwọ Nsọ na jide.
Na-ekwu okwu n'olu dara ụda, ndị na-anụ,
Chineke anyị bụ ịhụnanya, ha na-agaghị atụ egwu.
Mmụọ Nsọ, nke a ka m na-ekpe ekpere,
jupụta m taa.
Iji nwere ike, unu na ike,
ime ka ihe ziri ezi, ebe ha bụ ndị ọjọọ.
Mmụọ Nsọ, ka m na-enwu,
na Jizọs Kraịst, ndụ a nke m,
na ndị ọzọ mkpụrụ obi ga-achọpụta,
ihe ijere Chineke ozi bụ ihe niile banyere.
The mfe nzube nke a na agbasa ozi n'ikuku bụ na-akwali, gbaa, na-agba unu ume ka dị nnọọ ekpe ekpere. Nke a na redio na agbasa ozi n'ikuku idịghe maka ndị na-ama nzuzo na ike nke ekpere ndị na-eme ezi ekpere na a mgbe niile, kama ọ bụ n'ihi na ndị na-pụrụ isiri ya ike na-ekpe ekpere ma ọ bụ maka ndị na-ekwu na ha adịghị enwe oge na-ekpe ekpere. Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị mmadụ na-adịghị mkpa ịmụta otú ikpe ekpere; ha mkpa-ekpe ekpere naanị! Ọ bụrụ na m nwere ike inwe gị ka ị na-ekpe ekpere naanị, ụdị nile nke ihe ndị dị ebube ga-amalite na-eme maka gị, gị na ezinụlọ gị, na ihe ọ bụla Chineke akpọwo unu ka unu na-eme. Anyị adịghị ekpe ekpere dabeere na n'elu anyị nke onye mmetụta, ekpere anyị dabeere na n'elu bụ eziokwu na Okwu Chineke.
Ekpere anyị mkpali amaokwu Okwu Chineke taa bụ Jona 4: 2-3 nke na-agụ: "O we kpere Jehova, si, Biko, Jehova, ọ bụghị ihe a m na-ekwu, mgbe m ka nọ na m mba? Ya mere, m ọsọ tupu si Tashish: n'ihi na m maara na I bu a na-eme amara Chineke, na-emekwa ebere, ewe iwe ọsọ ọsọ, na nke oké obiọma, na repentest gi nke ọjọọ. Ya mere ugbu a, Jehova, na-, biko, ndụ m n'aka m; n'ihi na ọ dị mma ka m na-anwụ anwụ karịa ndụ. "
Kwe ka m na-eso gị ihe ụfọdụ dị mkpa banyere amaokwu a na Matiu Henry si Commentary:
N'amaokwu 3, Jonah ịbụ ugbu a n'etiti ya uru, ya mere dabara-ebi ndụ. Ọ bụ otu onye ozi Chineke ebube ekesịpde-ọma. Na ntughari nke Nineveh wee nye ya na-enwe olileanya nke ịbụ instrumental iji tọghata alaeze nile nke Asiria; Ọ bụ ya mere nnọọ uche na-adịghị na ya iche na ọ pụrụ ịnwụ mgbe o nwere a olileanya nke ịdị ndụ na-otú ahụ ihe ọma a nzube na nwere ike ịbụ otú ọrịa ibibi ha. Jonah ịbụ ugbu a nke ukwuu nke iwe ọkụ ma Ya mere-erughị eru anwụ. Olee otú durst ọ na-eche ọnwụ, ma na-aga n'ihu Chineke oche-ikpé, mgbe ọ na-n'ezie sesa ya? Bụ nke a a etiti nke mmụọ kwesịrị ekwesị ka nwoke aga nke ụwa na? Ma ndị na-passionately chọrọ ọnwụ na-enwekarị dịkarịa ala mere na-eme ya, dị ka ndị dị nnọọ ukwuu na-adịghị njikere maka ya. Anyị azụmahịa bụ iji nweta njikere ịnwụ site na-arụ ọrụ nke ndụ, na mgbe ahụ na-ezo onwe anyị nye Chineke iji pụọ anyị ndụ mgbe na otú ọ na-amasị.
My onye ịgba gị ume taa bụ na ị ga-agaghị ezi obi ụtọ site nwunye gị ma ọ site n'aka ndị ọzọ, ma, ị ga-enweta ya site n'irubere Jehova, na ikpe ekpere ga-enyere gị na-agbanwe agbanwe na-erubere Chineke isi na ya mere nwere nọgide obi ụtọ na ndụ gị.
Ekpere anyị mkpali see okwu taa bụ site na AC Dixon. O kwuru, sị: "Mgbe anyị na-adabere n'elu òtù, anyị na-enweta ihe òtù nwere ike ime; mgbe anyị adabere n'elu agụmakwụkwọ, anyị na-enweta ihe mmụta nwere ike ime; mgbe anyị na-adabere n'ahụ mmadụ, anyị na-enweta ihe mmadụ nwere ike ime; ma mgbe anyị na-adabere n'elu ekpere, anyị na-enweta ihe Chineke pụrụ ime. "
Ekpere anyị mkpali devotional taa bụ akụkụ 25 nke anyị usoro akpọ "ekpe ekpere site na" site Dr. John R. Osikapa.
Jizọs kụziiri importunate ekpere, na Luk 18: 1-8: "O we gwa a ilu si ha na njedebe a, na ndị ikom kwesịrị ikpe ekpere mgbe nile, na ọ bụghị na-ada mbà; Sị, e nwere na a obodo a ikpe, nke na-atụ egwu Chineke , ọ dịghịkwa ahuta nwoke: Ma e nwere a nwaanyị di ya nwụrụ n'obodo ahụ; o wee si ya, si, ọbọ m nke m iro. Ma ọ gaghị n'ihi na a mgbe: ma emesia ọ kwuru n'ime onwe ya, bụ ezie na m na-atụ egwu Chineke, ma ọ bụ banyere nwoke; Ma n'ihi na nke a di ya nwụrụ nēmekpa m, m ga-abọ ọbọ ya, ka ya nọgide na-abịa ọ ike gwu m. Jehova we, Nụrụnụ ihe na-ezighị ezi ikpe si. kwa bụghị Chineke ọbọ ya onwe ya hoputara, nke na-eti mkpu ehihie na abalị si ya, n'agbanyeghị na ọ na-agba ogologo na ha? m na-agwa gị na ọ ga-abọ ọbọ ha ọsọ ọsọ. Otú o sina dị, mgbe Nwa nke mmadụ nābia, ọ ga-chọta okwukwe n'elu ụwa? "
Rịba ama na ọbụ njedebe nke ilu na-ekpe ekpere site na. Jizọs kwuru ilu a "na njedebe a, na ndị ikom kwesịrị ikpe ekpere mgbe nile, na ọ bụghị na-ada mbà."
Ọbụna a ogbenye di ya nwụrụ pụrụ ịrịọ na a ikpe ịnụ ya kpatara ihe na-anapụta ya n'aka ndị na-emegide na-enye ya ikpe ziri ezi. Ma ha agaghi Chineke ụmụ ákwá si ya ehihie na abalị? "Ma Chineke agagh-abọ ọbọ ya onwe ya hoputara, nke na-eti mkpu ehihie na abalị si ya, n'agbanyeghị na ọ na-agba ogologo na ha?"
Amaokwu nke 8 n'elu hints na mgbe nzọputa-abịa, ọ ga-okwukwe nta n'elu ụwa. Ndị mmadụ na-ekweghị na ekpere. Ndị mmadụ adịghị na-ekpe ekpere site na. Ndị mmadụ adịghị akwụ ụgwọ na obi-nchọgharị, na ogologo awa, na-ebu ọnụ, na nkwupụta, na zughachi okè. Ma mgbe ndị Chineke n'ezie na-ekpe ekpere site na, mgbe ahụ, ha nwere ike revival, nchedo, ndokwa, manu nke Mmụọ Nsọ na ihe ọ bụla ọzọ Chineke nwere maka ndị Ya. Na-ekpe ekpere site na!
The unconverted mmehie kwesịrị ịtụkwasị Kraịst na n'otu ntabi anabata nzọpụta. Ma onye na-bụ ugbua a nwa Chineke nwere ikike mara ụlọikwuu, na Chineke doorstep nọgide na, insistently ịrịọ nkwa Chineke na ajụ ịnara a agugo, ruo mgbe na nke dị mkpa, nke bụ oké mkpa iji merie mkpụrụ obi na-enwe revivals, na-natara n'aka Chineke.
Oh, nwere ike ndị Chineke-ume-ekpe ekpere, na-ekpe ekpere, kpee ekpere --- nwere ike ha-ume na-ekpe ekpere site na!
Nọgidenụ na-ekpe ekpere ruo mgbe i na-ekpe ekpere ya site na
Ukwu Chineke nkwa bụ mgbe niile ezi
Nọgidenụ na-ekpe ekpere ruo mgbe i na-ekpe ekpere ya site na.
Ugbu a, enyi ọ bụ oge ka anyị na-ekpe ekpere ...
Cheta na ogwaokwu ga-enye ihe ọmụma n'ihi na ị na-eziga na ekpere gị arịrịọ na njedebe nke a na agbasa ozi n'ikuku.
Ugbu a, enyi, biko sonyere m ekpere ........ Nna Nsọ Chineke, dị ka anyị nwere nanị e chetaara, anyị na-ekele gị na anyị nwere ike na-ekpe ekpere site na banyere ihe ọ bụla na ihe niile na Jide n'aka na ị ga-anụ ma na-aza anyị . Anyị na-ekpe ekpere nakwa na ị ga-agọzi ma na-eduzi ihe niile ndi ozuzu aturu, ndị ndú chọọchị, na ndị ozi ala ọzọ gburugburu ụwa ndị na-eguzo n'ihi na ị na ndị na-n'ezie inyere ndị mmadụ aka. Anyị na-ekpe ekpere kwa maka:
> 3 nde mmadụ aka ịbịa mara gị dị ka nzọputa
> ihe revival nke chọọchị
>-agwọ ọrịa nke mba a
Onyenwe anyị, anyị na-ekpe ekpere nakwa na ị ga-azọpụta ma na-enye na-edu ndú na amamihe na president na ndị niile na ọchịchị ọchịchị, bụ ndị na-agba ọsọ a na obodo a, nakwa dị ka niile mba ndị ọzọ. Ugbu a, Onyenwe anyị, anyị na-ekpe ekpere maka atọ ndị zitere na Ekpere arịrịọ:
agwọ ya na nna ya na-iwu dị ka gị uche na-agba ume ya na ezinụlọ ya na ndị enyi n'oge a
nyere ya aka ịkwụsị ya umengwụ mere na o nwere ike ime ọrụ i na-akpọ ya na-eme
gọzie ya na ndị enyi ya na ọrụ
Nna Nsọ Chineke, anyị na-ekpe ekpere maka ndị na-esonụ ndị na-nabatara ị n'ime obi ha. Anyị na-ekpe ekpere, Onyenwe anyị, na ị ga-akwado ha na okwukwe na ha na-eto eto na okwukwe na-mmụọ nsọ-jupụtara Kraịst na ị chọrọ ka ha na-adị. Anyị na-ekpe ekpere kpọmkwem maka ----
Anita na Mexico
Michael na Yuma, Arizona
Ugbu a Jehova anyị ikpe ekpere maka ndị na-esonụ ndị a zọpụta maka mgbe ma ndị recommitted ndụ ha nye Ị. Anyị na-aṅụrị ọṅụ na ha mkpebi a na-ekpe ekpere na ha ga na-ha nkwa ime gị na di ike n'okwukwe. Anyị na-ekpe ekpere kpọmkwem maka ----
Andrew na Calumet Park, Illinois
Carrol na Canada
Shanda na Chicago, Illinois
Ezigbo enyi, ọ bụrụ na ị na-amaghị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dị ka gị nzọputa, gị na mbụ ekpere kwesịrị ịbụ ihe anyị na-akpọ mmehie ekpere. John 3:16 na-ekwu "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya, nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bula nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi." Ọ bụrụ na ị dị njikere kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst maka nzọpụta, biko ekpe ekpere na m mfe ekpere: Nna nke eluigwe, m na-aghọta na m onye mmehie na na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ ná ndụ m. N'ihi na Jizọs Kraịst, n'ihi biko gbaghara m nke m na mmehie m. M ugbu a kwere na niile nke obi m na Jizọs Kraịst nwụrụ n'ihi m, e lie ya, bilie ọzọ. Onyenwe anyị Jizọs, biko bata nime obi m na-azọpụta mkpụrụ obi m na-agbanwe ndụ m taa. Amen.
Ekele na-eme ihe kasị mkpa ná ndụ na na na ịnakwere Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe gị na Onyenzọpụta! Maka ozi ọzọ iji nyere gị aka na-eto eto na ọhụrụ gị okwukwe na Kraịst, na-aga GospelLightSociety.com na-agụ "Gịnị Ka Ị Mgbe Ị Tinye Site n'Ọnụ Ụzọ."
Ruo mgbe oge ọzọ, Cheta, enyi, kpee ekpere, Chee echiche, na-eme! Chukwu gozie gị!